एप्पल टिभी4मा क्लासिक कन्सोलहरू कसरी खेल्ने आईफोन समाचार
एप्पल टिभी ((र आईफोन) मा क्लासिक कन्सोलहरू कसरी खेल्ने।
चौथो जेनरेशन एप्पल टिभीसँग धेरै महत्त्वपूर्ण नयाँ सुविधाहरू छन्, तर मलाई लाग्छ हामी सबै सहमत छौं कि यसको सबै भन्दा ठूलो आकर्षण भनेको यो आफ्नै एप स्टोर हो। यस समयमा आईओएसमा यति धेरै अनुप्रयोगहरू छैनन्, नजिक पनि छैनन्, तर यो केवल समयको कुरा हो कि हामी हाम्रो एप्पल टिभीसँग लगभग केही पनि गर्न सक्छौं And र लगभग केहि पनि गर्ने कुरा गर्दा, त्यहाँ हामीले गर्न सक्ने एउटा कुरा छ के यसले हामीलाई खेल्ने हामी सबैलाई विशेष भ्रम बनाउँछ क्लासिक कन्सोलहरू जस्तै सेगा द्वारा मास्टर प्रणाली २ र मेगा ड्राइभ वा निन्टेन्डो र सुपर निन्टेन्डो निन्टेन्डो (डोह!) द्वारा, र हामी यी कन्सोलहरूको शीर्षक खेल्न सक्छौं जेम्स एड्याम्यान, विकासकर्ता जसले धन्यवाद प्रोभेन्स, एक बहु-कन्सोल इमुलेटर.
यो स्थापना गर्न, हामी यो तथ्यको फाइदा लिनेछौं कि एप्पलले भुक्तान विकासकर्ता खाताको लागि आवेदनहरू परीक्षण गर्नको लागि सोध्दैन। यस तरीकाले, हामी केवल एक इमुलेटर को स्रोत कोड प्राप्त गर्न को लागी र यसलाई हाम्रो एप्पल टिभीमा डम्प गर्नुहोस् (वा आईफोन र आईप्याड) Xcode को साथ। यो एक प्रक्रिया हो जुन हामीले गल्ती गर्न सक्दछौं भन्ने कुरा सत्य छ, तर यो सरल छ जब हामीले यो पहिले नै एक पटक गरिसकेका छौं। हामी तलको प्रक्रिया विस्तार गर्दछौं।
1 एप्पल टिभीमा क्लासिक कन्सोलहरू कसरी खेल्ने
1.1 हामीलाई के चाहिन्छ:
1.2 प्रोभेन्सन्स कसरी स्थापना गर्ने
1.3 प्रोभेन्समा कसरी ROM अपलोड गर्ने
2 प्रणाली आईफोन मा काम गर्दछ
एप्पल टिभीमा क्लासिक कन्सोलहरू कसरी खेल्ने
हामीलाई के चाहिन्छ:
अनुप्रयोगको स्रोत कोड
एप्पल विकासकर्ता खाता (नि: शुल्क)
प्रोभेन्सन्स कसरी स्थापना गर्ने
हामी यहाँ विकासकर्ताको रूपमा दर्ता गर्दछौं यो लिंक.
हामी एप्पल टिभीलाई USB-C केबलको साथ म्याकमा र सम्बन्धित केबलको साथ पावर आउटलेटसँग कनेक्ट गर्दछौं।
हामी पृष्ठमा जान्छौं जहाँ आवेदन कोड होस्ट गरिएको छ र यसको URL प्रतिलिपि गर्छौं। यस अवस्थामा, प्रोभेन्स वेबसाइट जुन GitHub मा छ, जहाँबाट हामी प्रतिलिपि गर्नेछौं क्लोन युआरएल.
हामी एक्सकोड खोल्छौं र जान्छौं स्रोत नियन्त्रण / चेक आउट.
हामीले युआरएल टाँस्यौं जुन हामीले चित्रमा प्रतिलिपि गरेका थियौं जुन हामीले विन्डोमा देख्छौं जुन हामीलाई खोल्दछ।
यदि त्यहाँ एक भन्दा बढि फाईलहरू छन् जब यो अपलोड गर्न समाप्त हुन्छ, हामी छनौट गर्दछौं मास्टर। त्यसपछि हामी क्लिक गर्दछौं अर्को.
नयाँ विन्डो स्वत: खुल्नेछ। यो विन्डोमा, हामीले छनौट गर्नुपर्दछ (यस अवस्थामा) प्रोभेन्सन्स र त्यसपछि ProvenanceTV- रिलीज.
हामी हाम्रो एप्पल टिभी छनौट गर्दछौं र क्लिक गर्नुहोस् त्रिकोण बटन (प्ले जस्तै)। यसले अनुप्रयोग कम्पाइल गर्न सुरू गर्दछ।
त्यहाँ बगहरू हुनेछ, तर हामी तिनीहरूलाई सच्याउनेछौं हाम्रो एप्पल आईडी छनौट गर्दै y फाइलको नाम बदल्दै (तपाईं भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ) अनुप्रयोगको मुख्य सेक्सनमा। त्यसोभए हामीले फेरि खेलमा हिट गर्‍यौं, यो अनुप्रयोगको कम्पाइल र स्थापना समाप्त हुनेछ। तपाईंले «को सन्देश हेर्न प्रतीक्षा गर्नुपर्दछसफलता निर्माण गर्नुहोस् ».
प्रोभेन्समा कसरी ROM अपलोड गर्ने
प्रोभेन्समा अब हामी केवल ROMs अपलोड गर्नुपर्दछ। यसको लागि हामी निम्न कार्यहरू गर्नेछौं:
हामी हाम्रो एप्पल टिभीमा प्रोभेन्सन्स खोल्छौं।
हामी चयन गर्दछौं ROMs आयात गर्नुहोस्। यसले हामीलाई यूआरएल देखाउँनेछ।
हामी URL लेख्छौं जुन अघिल्लो चरणले हामीलाई मा दिएको थियो ब्राउजर हाम्रो कम्प्युटरबाट।
हामी फोल्डर छनौट गर्दछौं «रोम"(महत्त्वपूर्ण, त्यो भिडियोमा गलत छ) र त्यसपछि हामी छनौट गर्दछौं ROM अपलोड गर्नुहोस्.
हामी एप्पल टिभीमा फर्कन्छौं, हामीले विन्डो बन्द गर्छौं जहाँ हामीले युआरएल देख्यौं जुन हामीले ब्राउजरमा राख्यौं र हामी ती खेलहरू देख्नेछौं जुन हामीले उनीहरूको कभरहरू र सबैकुरासँग अपलोड गरेका छौं।
र यो हो। तपाईं तलको भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ, सिरी रिमोटको नियन्त्रण धेरै राम्रो छैन। प्ले / पज बटन जम्प बटन हो र टच प्याड क्लिक शुट बटन हो। सबै भन्दा राम्रो कुरा एक MFi रिमोट, केहि चीज हो जुन मलाई लाग्छ कि म खरीद गर्छु।
प्रणाली आईफोन मा काम गर्दछ
यो प्रणाली आईफोनमा पनि काम गर्दछ। सबै जसो व्यावहारिक समान छन्, केवल भिन्नताका साथ हामीले आईफोन फाइल छनौट गर्नुपर्नेछ जब हामी एक्सकोडमा चरणहरू प्रदर्शन गर्दैछौं। आईफोनमा ROM लाई राख्न हामीले यसलाई आइट्युनसँग मात्र गर्नु पर्छ, जसरी हामी फाइलहरू स्वीकार गर्ने कुनै पनि अन्य अनुप्रयोगसँग गर्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » Apple TV » एप्पल टिभी ((र आईफोन) मा क्लासिक कन्सोलहरू कसरी खेल्ने।
एलेक्स (टोरेटो) (@ toretto85bcn) भन्यो
oleeeeee, उत्तम ट्यूटोरियल, योगदानको अंश र धेरै राम्रो समाचार हो सर, यससँग मसँग पहिले नै एप्पल टिभी4लाभदायक छन् १ मा con कन्सोलहरू राख्दै (प्लस अनुप्रयोगहरू र नेटिभ टिभीओएस खेलहरूको पाठ्यक्रम) ... यूएसबी जति सक्दो चाँडो केबल आइपुग्छ- म चरणहरू अनुसरण गर्दछु, तपाईं जीत!
एलेक्स (Toretto) लाई जवाफ दिनुहोस् (@ toretto85bcn)
यो उत्तम छ यदि छैन किनकि विकासकर्ता खाता नि: शुल्क छैन
मैले भर्खरै अर्को खातामा प्रयास गरें जुन मसँग छ र यसले कुनै असफलता दिदैन। तपाईंले भर्खर प्रविष्ट गर्नु पर्छ जहाँ यसले "सदस्य केन्द्र" भन्छ र पाठ स्वीकार गर्दछ। भुक्तानी अनुप्रयोग स्टोरमा अनुप्रयोगहरू अपलोड गर्नु हो।
eduo (@eduo) भन्यो
खाता पूर्ण नि: शुल्क छ। यसको लागत एप्स स्टोरमा प्रकाशित गर्नु हो।
एडु (@eduo) लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, तपाईको योगदानको लागि सब भन्दा धेरै धेरै धन्यवाद। मसँग एउटा प्रश्न छ, यो कोडि स्थापना गर्ने बखत के हुन्छ? त्यो हो, नि: शुल्क विकासकर्ता इजाजतपत्रमा हस्ताक्षर एक हप्ता पछि वा उत्तम केसमा months महिना हुन्छ?
धन्यवाद र अभिवादन,
डेभिडर्जलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते डेविडर्ज। दुर्भाग्यवस, तिनीहरूले वैधता अवधि परिवर्तन गरेका छन् र अब सबै चीज केवल एक हप्ताको लागि मात्र मूल्यवान छ।
कर्भ, एक वाटरप्रूफ र आघात प्रतिरोधी आईफोन case केस
के iOS मा कम समय मा जेलब्रेक छ?